September 7, 2013 BASHIR HASHI YUSSUF 1 Comment
Sidoo kale wasiirka arrimha gudaha ayaa isna xilkii uu ku magacawnaa ka qaaday S/Guuto Abukar Cali Axmed (xaan kaa dheefaa) oo hayay xilka ah madaxa hoggaanka guud ee howlgelinta ciidanka Booliska xilkaasoo uu hayay laga soo bilaabo 23 july 2013 markaasoo dikreeto nambarkeedu yahay Xog/9-91/103 oo ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidanka booliska General Cabdixakiim Saacid xilkaas loogu dhiibay.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed General Saacid oo haatan safar dibadda ah ku maqan ayaan la garanayan mowqifka uu ka qaadan doono talaabadan uu qaaday wasiirka arrimaha gudaha ee xilka kaga qaaday saraakiil saaxiibo dhow la ah oo uu isagu horey si naas nuujin ah ugu magacaabay xilala aysan u qalmin aqoonteeda iyo kartideedana lahayn.
Tan iyo intii general Saacid loo magacaabay xilka taliyaha ciidanka Booliska soomaaliyeed ayaa waxaa jira dib u dhac iyo habacsanaan ku timid howlihii ay ciidanka boolisku hayeen kuwaasoo ku socday dardar xoog leh oo rajo gelisey dhamaan shacabka soomaaliyeed iyo caalamka oo dhan kuwaasoo rajeynayay in muddo yar gudahood ay Soomaaliya heli doonto ciidan boolis oo ku filan hanashada dhamaan howlaha sugidda aminiga ee deegaanada ay dowladdu ka taliso.
General Saacid ayaan haba yaraatee la iman wax qorsho iyo istiraatijiyad u gaar ah oo uu ku horumarinayo ciidanka booliska soomaaliyeed iyo howlaha lagu sugayo amniga dalka, taa beddelkeedna wuxuu joojiyay dhamaan wixii isbeddelo ah iyo qorsheyaal ah ee ay dejiyeen madaxdii isaga ka horeysay.
Tusaale ahaan wuxuu joojiyay qorshe lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho taasoo uu horey u dejiyay taliyahii hore ee Ciidanka booliska S/gaas Shariif Sheekhuna qorshahaas oo ahaa in habeen walba sarkaal ka mid ah saraakiisha sare ee ciidanka booliska uu noqdo sarkaalaka ku qoran heeganka kana masuul ah fulinta roondooyinka iyo howlaha lagu sugayo amniga magaalada.
Qorshahaas oo ahaa qorshe mira dhal ahaa ayaa sarkaal walba oo hebeenkii waajibka ku qornaa waxaa uu ku qasbanaa inuu howshiisa u guto si hufan maaddaama saacadaha uu sarkaalkaasu shaqada ku jiro wixii dhaca isaga lagula xisaabtami jhiray.
Wasiirka arrimaha gudaha ayaa haatan amark u bixiyay in qorshahaas Uu General Sheekhuna horey u dejiyay dib loo soo celiyo laga bilaabo habeenkii xalay ahaa, lamana oga General Saacdi marka uu safarka dibadda ah ka soo noqdo tallaabada uu ka qaadi doono isbeddelada uu ku dhaqaaqay wasiirka arrimaha guduhu.
General Cabdixakiid Daahir Saciid (saacid) ayaa haatan safar ku joogo dalka turkiga waxaana safarkaas ku weheliya qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska oo uu ka mid yahay General Axmed Xasan Maalin taliyihii hore ee ciidanka boolisika gobolka banaadir
← Shilgaari oo Ka Dhacay Agagaarka Aroonka Diyaaradaha Ee Magaalada Cadaado
One thought on “Jen.Garaad Nuur Cabdulle oo Xilkii laga qaaday kadib 10-Cisho uu xilkaasi hayay (Xog Cida ka qaaday iyo Sababta)”
September 7, 2013 at 10:09 pm	 Reply